FBC - Teekinooloojin ariitiin daddabarsa dhiigaa hir’achuu mul’isu yaalii irra oole
Teekinooloojin ariitiin daddabarsa dhiigaa hir’achuu mul’isu yaalii irra oole
Finfinnee, Waxabajjii 05,2010 (FBC)- Dhukkubsattoota wal’aansa baqaqsanii yaaluu irra jiran teekinooloojin ariitii daddabarsa dhiigaa hir’achuu mul’isu yaalii irra oole.
Dhukkubsattootni yeroo wal’aansa baqaqsanii yaaluu irra jiran daddabarsi dhiigaa yoo hir’ate dhiigni kantaruun qaamota keenya biroof osoo hin gahiin hafuu akka danda’u qorannoon waldaan ogeeyyota fayyaa Ameerikaa agarsiise.
Kanaan dura namootni wal’aansa baqaqsanii yaaluu argatan rakkoon akkanaa kan isaan muudatae waan ta’eef, teekinooloojin haaran kun rakkichi osoo hin muudatiin daqiiqaa 15 dura mallattoo kan agarsiisu fi dhibbentaa 84 bu’a qabeessa ta’uutu ibsame.
Meeshan haaraan kun dhukkubsataan osoo wal’aansa baqaqsanii yaaluu irra jiruu duursee daqiiqaa 10 hanga 15 keessatti daddabarsi dhiigaa hir’achuu kan agarsiisu waan ta’eef, ogeessi duursee of qopheessun wal’aansa milkaa’aa raawwachuu kan danda’u ta’uu Loosangalasitti piroofeesar Maaksi Meekaanesan dubbataniiru.
Teekinooloojin kun dhukkuba onnee,kalee fi namoota balaa du’aaf saaxilaman lubbuu isaanii baraaruf kan tajaajilu ta’uu ibsameera.
Qorattootni dhukkubsattoota kuma 1 fi 334 irratti daqiiqaa kuma 500 fi kuma 45 fi 959’f hordoffii teekinooloojii kanaan taasisaniin daddabarsi dhiigaa gadi aanaa ta’uu kan agarsiisu ta’uu mirkaneessanii jiru.
Bulchiinsi Nyaataa fi Qoricha Ameerikaa teekinooloojii kanaa beekkamtii kennee jira.
Oduuwwan Biroo « Maangoon rakkoo bullaa’insa soorataa ni fura jedhame-Qorannoo	Baatiiwwan Gannaa maalif hawwataa ta'u? »